KALANCHOE: GURYAHA DAWOOYINKA, ISTICMAALKA IYO KA HORJOOGSIGA EE ISTICMAALKA - DHIRTA GUDAHA
Dadku way yaqaanaan laakiin Dhirta Kalanchoe ma aha oo kaliya u adeega sida walxaha qolka qolka, laakiin sidoo kale waxay ku caawin kartaa daaweynta xanuunka kala duwan. Caleemaha Fare ee Kalanchoe waxay inta badan leeyihiin guryaha faa'iido leh. Casiirka iyaga ka mid ah ayaa muhiim u ah daawooyinka loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta. Waxaa lagu diyaarin karaa guriga ama ka iibsan kartaa farmashiyaha. Bogsiinta "nectar", inta badan, ayaa lagu qaataa daaweynta xididdada dhiigga, xubnaha jidhka caloosha, hargabka iyo cudurrada maqaarka.
Qaabdhismeedka kiimikada ee Kalanchoe
Kalanchoe waxay leedahay habdhaqameed biyoge oo si fiican isugu dheellitiran, taas oo ay sabab u tahay waxqabadyo badan oo daaweyn ah.
Soodhaha geedka waxaa hodan ku ah asiidhyada dabiiciga ah (citric, sorrel, malic, acetic) polysaccharides, flavonoids, tannins iyo enzymes. Intaa waxaa dheer, waxaa ku jira rutin iyo ascorbic acid.
Isku dar ah, walxahan waxay si firfircoon u xoojiyaan derbiyada xididdada dhiigga, yareeyaan murqaha jidhka. Caleenta Kalanchoe waa 90% biyaha, 10% haray ayaa ah macdanta macdanta, calcium, silicon, manganis, birta, naxaas iyo aluminium.
Ma taqaanaa? Kalanchoe waxaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee dadweynaha ee niyad-jabka, sababtoo ah waxay ka caawisaa dadka ku adkaata in ay la kulmaan maalin cusub niyadda wanaagsan
Bogsiinta sifooyinka Kalanchoe
Sifooyinka bogsashada ee ubaxyada guriga Kalanchoe ayaa muddo dheer si fiican loo darsaday.
Warshadu si fiican ayey u nadiifisaa hawada qolka, waxay burburisaa microbes.
Kalanchoe waxay si deg deg ah ula qabataa CVVI, sanka oo dareera iyo qabow.
Dhirta casiirka waxaa loo isticmaalaa sidii wakiil awood leh oo ka hortag ah.
Kalanchoe waxay leedahay bakteeriyada iyo bakteeriyada.
Miracle-ubax waxay caawisaa inay bogsato nabarrada, nadiifiso dhiigga waxayna ka qaadaa sunta sunta jirka, waxay kor u qaaddaa xinjirta dhiigga wanaagsan, waxay siinaysaa awood, xoogna leh iyo masuuliyad xoog leh.
Ma taqaanaa? Haddii Kalanchoe uu ku yaallo qolka fadhiga ama jikada, wuxuu ka qaybqaataa jawi wanaagsan oo guriga ka mid ah, haddii aad sariirta ku dhejiso, markaa waxaad toosi doontaa oo aad u faraxsan tahay subax kasta.
Daaweynta cudurrada maqaarka
Warshadani si gaar ah ayaa loo isticmaalaa daaweynta cudurrada maqaarka iyo dhaawacyada. Iyadoo si joogto ah loo gooyey Waxaad u baahan tahay inaad isla markiiba dalbato boogta waraaqo nadiif ah ee Kalanchoe, oo si dhakhso ah ayuu u bogsan doonaa. Dhibaatooyinka suufka, ka dib daaweyno dhowr ah, ayaa ciriiri doona oo aan la arki doonin.
Gubasho Waxaan soo jeedineynaa isticmaalka qalabkan: waa inaad ka sameysid juus ah juuska calanchoe iyo ukunta qoyan oo ku dheji maqaarka gubtay maqaarka. Waxaad si fudud u gooyn kartaa caleemaha geedka waxayna ku xiran tahay goobta dhibaatada dhowr saacadood.
Kalanchoe waa qayb ka mid ah daaweynta wanaagsan ee dagaalka ka dhanka ah boogaha. Waxaan ku talineynaa in aad fiirsato laba cunto oo waxtarka leh.
Cabbiraad ka timid Kalanchoe No. 1
Isku qas 40 ml oo casiir ah Kalanchoe iyo 100 g of lanolin anhydrous. Isku dar waxaa loo isticmaalaa si uu u kariyo dhowr jeer maalintii. Biyaha cadmadu waa lagama maarmaan qaybta hoose ee qaboojiyaha.
Kalanchoe cadarin # 2
Isku qas quraar badh koob oo cabitaan leh hal qaado oo ah burooyinka cagaarka ah iyo hal qaado oo ah Hypericum, ku dar saliidda cuntada. Ku adkee isku darka todobaadkii, ka dibna adkee. Codso inaad karkariso 3-4 jeer maalintii.
Dhirta caleemaha waxaa lagu daaweeyaa boogaha trophic, fistulas iyo sariiraha. Xaaladahan, aagga maqaarka ay saameeyeen waa in lagu daboolaa dhowr lakab oo faashad nadiif ah, lagu qooyay casiir cusub Kalanchoe. Marka faashadda la qalajiyo, mar kale waa la kulmay. Waad beddeli kartaa faashadda hal mar maalintii.
Markaad xallinayso dhibaatooyinkaa, way fiicantahay laga soo saaro caleemaha Kalanchoe. Waxay u baahan yihiin inay qaataan 100 garaam oo ku shub 0.5 litir oo biyo ah karkaraya, ka dibna ku adkeyso afar saacadood. Ka dib daboolka iyo karkarinta biyaha qubeyska ilaa soddon daqiiqo. Ka dibna adkee oo uumi kala badh. Isgoysyada waxaa laga sameeyaa laga soo dhejiyey alaabta.
Guryaha bogsashada ee cabitaanka Kalanchoe waxaa loo yaqaan dad badan oo xasaasiyad leh. Waxaa lagu qasi jiray biyo diirran, ka dibna ka dhig kareemaha meelaha bararsan.
Haddii lagaa xanuujo burooyinka, isku day inaad geliso kalanchoe la jarjarey iyaga, iyaga xiro faashad oo ku cadaadi 15 daqiiqo. Ku celi habkaan sahlan ee haboon laakiin maalin kasta.
Kalanchoe sidoo kale waxay ka caawisaa in laga takhaluso herpes iyo shingles: ku dhaji meelaha meelaha ay dhibaatadu ka soo gaarto casiirka dhirta.
Finanka finanka, Kalanchoe waxay wajahayaan maaskaro oo saameyn ku leh. Isku darka noocaan ah wuxuu ka caawiyaa inuu yareeyo caabuqa wuxuuna caawiyaa dhuunta dhuudhuuban. Codso maaskarada si aad u nadiifiso maqaarka. Waxaanu bixinnaa labo cunto oo waxtar leh.
Kalanchoe Mask # 1
Chamomile, elderberry iyo linden isku daraan saamiyo isku mid ah oo ku shub hal galaas oo biyo diirran. Ku buufin 10 daqiiqo, ka dibna cadaadis. In isku dhafkan waxaad u baahan tahay inaad ku darto qaado qaado oo ah oatmeal, kala badh shaaha malab iyo shaaha ah ee cabitaanka Kalanchoe. Ka dib nus saac ka dib, maaskarada waa in lagu maydiyaa biyo kulul.
Kalanchoe Mask # 2
Qaado oo ah dill iyo Kalanchoe caleemo wareejin iyada oo Booqday Furimaha Dagaalka hilib ah. In slurry keentay ku dar saliida iyo saliidda shuban. U daadi wejigaaga wejigaaga kuna qabo 30 daqiiqo, kadibna biyo raaci biyo.
Daaweynta cudurada afka
Kalanchoe waxaa si weyn loo isticmaalaa daaweynta cudurrada afka: stomatitis, gingivitis, cudurada loo yaqaan 'periodontal disease. Suufka suufka ah ee lagu qooyay casaankii Kalanchoe waxaa laga dalbadaa aagagga cirridka leh, cirridka iyo neefta aerosol ayaa sidoo kale lagu dabaqaa. Dhammaan nidaamyadani waa sahlan tahay inay sameeyaan guriga. Jadwalka caadiga ah - 4 jeer maalintii maalintii 20 daqiiqo.
Iyadoo loo yaqaan 'periodontitis' Kalanchoe wuxuu kaa caawinayaa yaraynta cirridka dhiigga, ka saar dareenka cuncunka, iyo isticmaalka dheeraadka ah ee malaxdu ka baxdo, cirridku waxay ku noqdaan gobolka asalka ah.
Ma taqaanaa? Dad yar ayaa og in Kalanchoe uu u fiican yahay ilkaha. Waxaad u baahan tahay kaliya inaad ku calaliso caleen warshad.
Daaweynta cudurka indhaha
Qaar ka mid ah dhaawacyada gubashada iyo indhaha (tusaale ahaan, barar iyo nabaad-guurka), isbeddelka dystrophic ee waxyaallaha indhaha ah), Casiirka Kalanchoe wuxuu caawiyaa wax badan. Waxaa lagu qasi doonaa xal 0.5% oo ah xal sodyam ama kiniiniga nocoineka ah ee saamiga 1: 1. Nidaamyadani waa la samayn karaa si madaxbannaan, laakiin keliya ogolaanshaha dhakhtarka.
Casiirka Kalanchoe waa mid aad u faa'iido leh dadka qaba dhibaatooyinka shaqada caloosha: gastritis, enteritis, boogaha. Waxay yareysaa infakshanka cunaha, waxay kicisaa habka dayactirka unugyada. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la tixgelinayo xaqiiqda ah in ay jiraan cuduro badan oo caloosha ah, dhakhtarku wuxuu go'aamiyaa isticmaalka iyo qiyaasta dawada kiis kasta.
Oo leh astaamo aan wanaagsaneyn sida mulkuto, qashinka fudud ee dadku waxay caawin doonaan inay wax ka qabtaan. Cun caleen yar oo Kalanchoe ah calaamadaha ugu horeeya. Waxaad dareemi doontaa saamaynta dhowr daqiiqadood.
Daaweynta cudurrada caabuqa
Marka sinusitis sanka dhirta la gooyey ama isticmaali kariimka Saliida Kalanchoe. Waxay sidoo kale wax ku oolsan tahay dhuun xanuunka, qumanka, xakamaynta bararka dhegta dhexe.
Si looga hortago cudurada sanbabada iyo cudurada nasopharyngeal, cabitaanka Kalanchoe waa in lagu qasiqiyaa biyo 1: 5 isku dhafan oo la qaboojiyey 2 dhibcood 5 jeer maalintii. Xalkani wuxuu goglan karaa laryngitis, qumanka, dhuun xanuun, suuxdin daran.
Daawada qumanka ee joogtada ah Waxaa sidoo kale lagu muujiyay koronto-ku-darsiga oo leh cabitaanka Kalanchoe marxaladaha saddex jeer toddobaadkii.
Daaweynta cudurada dhegta
Ka dib marka cudur la isqaadsiiyo, barar-xanuunku wuxuu dhacaa - otitis. Si loo dedejiyo dib-u-soo-kabashada bukaanka iyo in la hagaajiyo xaaladdiisa sidoo kale waxaa suurtagal ah caawinta Kalanchoe.
Tampoon lagu riixay shubka geedka ee waa in si taxadar leh loo dhigaa dhagax xanuunka oo uu ku tagaa dhowr saacadood. Waa lagama maarmaan in la beddelo 5 saacadood kasta. Kalanchoe ayaa si kaamil ah u yareynaya caabuqa wuxuuna leeyahay saameyn xanuunka.
Wixii cadaadis ah oo leh otis waxaad u baahan doontaa: Casiir caloosha, faashad, vodka ama khamriga, filim caag ah. Foornada laab afar jeer iyo joodariga dhexe.
Isku qas vodka ama aalkolo leh juice Kalanchoe 1: 1 saamiga. Ku dhaji faashadda isku-darka diyaarinta oo ku soo dheji dhagta bukaanka si aad u furto.
On faashad, gelin filimka, ka dib markii la jarayo. Ka dibna dhegaha dhegeyso lakabka weyn ee maqaarka ah ama maro diiran iyo hagaajin. Ku hay cadaadiska muddo aan ka badneyn 30 daqiiqo.
Haddii dhakhtarku waxyeelo, cabitaanka Kalanchoe waa in lagu riixo dhegta ama suufka faashadda lagu daboolo xubnaha jiran.
Waa muhiim! Xaaladaha ba'an iyo kuwa sare, Kalanchoe waxaa loo isticmaali karaa sidii lagu daaweyn lahaa, laakiin daaweynta cudurka laftiisa, waxaad u baahan tahay daawooyin adag ama duritaan.
Daaweynta cudurrada xubnaha taranka dumarka
Dhaqtarka iyo dhakhtarka dumarka ayaa si fiican u yaqaan qaababka bogsashada ee Kalanchoe. Cabbitaanka, oo ay ku jiraan dhirta dhirta, bogsashada nabarrada perineal, nabaad-guurka, dhaawacyada dhalmada iyo jeexjeexyada, caabuqa xuubka xabka.
Boogaha iyo ilmada isticmaal habka daaweynta sida qalliinka. Marka caabuqa Kalanchoe qulqulaya geedi socodka dib u soo celinta aagagga waxyeelada leh, waxay kor u qaadeysaa saameynta qaababka jireed. Marka la daaweynayo xubnaha taranka dumarka Ku darso dhawr dhibcood oo ah dheecaanka miraha si ay u saameysaan 5 maalmood.
Kalanchoe waa mid aad u faa'iido leh hooyooyinka kalkaaliyaha, gaar ahaan kuwa qaba ibta dillaacay. Qaybaha ka samaysan casiirka Kalanchoe si dhakhso ah ayuu u bogsiiyaa dildilaaca, sidaa darteed, haweenka ka yareeya dareenka xun. Kadib naas nuujin kasta, daroogada waxaa lagu daboolaa dhuunta oo leh dhawr dhibcood oo ku yaal bir ibta.
Daaweynta Walxaha Dheeraadka ah
Si aad uga takhalusto dareemada aan fiicneyn ee la xidhiidha xididdada xakamaynta, ku rid faashad ku dhex qoyan juice Kalanchoe on knots. Waa in lagu hayaa 30-40 daqiiqo.
Marka xanuun ku dhaca lugaha iyo xuubka yar ee xididdada, isku day hab kale oo daaweyn ah. In dhalada nus litir ah, ku shub kalanchoe la jarjiray si ay u qaataan kala badh awoodda, ku dar 70% aalkol ah iyo gelin meel madow toddoba maalmood.
Dhowr jeer toddobaadkan waxaad u baahan tahay inaad hesho dhalo oo ruxin. Muddada ka dib, waxaad bilaabi kartaa daaweyn. Habeenkii, cagaha ku xoqeen tincture cagaha ilaa jilbaha. Xanuunku si dhakhso ah ayuu u gudbi doonaa, laakiin daaweynta cudurka laftiisa, habka waa in lagu celiyaa lix bilood.
Isticmaalka Kalanchoe ee qurxinta guryaha
Iyada oo leh habdhaqan noocan oo kale ah, Kalanchoe ayaa muddo dheer ka dhistay dhinaca ugu fiican ee qurxinta guryaha.
Nadiifi maqaarka. Wejigaaga ku nadiifi caleen Kalanchoe, ka dib markaad ka saarto maqaarka. Si aad u sameyso casiirka si deg deg ah, ku dhaji si khafiif ah wejiga leh weelasha farahaaga. Ka dibna wejigaaga ku sii fidi kareemka caadiga ah ee nafaqada. Ka dib markii nidaamyada koowaad, maqaarka ayaa si muuqata u cusbaya.
Isku daridda finanka. Caleemaha caleemaha la jarjarey ku shub hal galaas oo biyo karkaraya ah oo ka bax saddex saacadood. Kadibna cadaadis. Ku dhaq wejiga leh isku dhafka waqti kasta ka dib marka aad maydheyso. Dareeraha wuxuu kaa caawinayaa yaraynta maqaarka iyo maaddada dhuuban.
Caleenta indhaha hoosteeda. Ka saar maqaarka ka soo baxa Kalanchoe oo u codso in ay kuusaan, ama ka sameeyaan kareemaha suufka qoyan ee casiirka Kalanchoe.
Daryeelka gacanta. Si tartiib ah u jeexay casiir Kalanchoe oo isku qasan kareemo gacmeed, ku rid lakab qaro ah oo timirta ah oo xiro gacmo gashi korkiisa. Ha boobin ilaa subixii. Casiirka geedka ayaa xoojiya ciddiyaha si fiican. Ku calaamadee faashad, ku duub ciddiyaha, ka dibna gashato.
Dareemayaasha iyo da'da da'da. On the area of ​​pigmentation khuseeyaan caleemo Kalanchoe, jajabin galay galay boqoshaada. Natiijo wanaagsan ayaa soo baxaya ka dib isticmaalka joogtada ah.
Makhaaraynta iyo kaydinta qalabka ceeriin ee caafimaadka Kalanchoe
Casiirka Kalanchoe diyaarisay caleemaha iyo qaybta cagaaran ee asliga ah ee Kalanchoe. Gawaarida cusub ayaa la dhaqaa oo waxay ku dhaaftaa qaboojiyaha illaa hal asbuuc. Kadibna waxay wax kasta u qulqulayaan slurry labeenta, tuujin juice oo difaac heerkulka 5-10 ° C.
Marxaladda ugu dambeysa ee geeddi-socodka, ayaa la nadiifiyey oo la ilaaliyey khamriga, ku shubtay weelasha. Kala soocid casiir Kalanchoe waa dareeraha jilicsan oo jilicsan oo jilicsan oo leh cadaan gaar ah.
Qof kasta, nasiib daro, wuu ogyahay sida loo kaydiyo cadarka iyo casiirka Kalanchoe. Aad bay muhiim u tahay in heerkulku aanu ka badneyn 10 ° C. Qaboojiyaha ayaa ku haboon tan, xilliga qaboobaha, loggia ama maqaasiinka. Laakiin xitaa in xaaladaha noocaas ah ma aha lagama maarmaan si loo badbaadiyo dheecaanka geedka muddo ka badan hal sano.
Kalanchoe saliid waxaa ku jira dheecaanka miraha, novocaine, furazolidone iyo lanolin anhydrous. Waxaa lagu daboolayaa nabarka hal mar maalintii ama soo rogo suunka, kaas oo daboolaya dusha boogta. Boomaatada waxaa loo isticmaalaa antiseptics muddo ka badan 14 maalmood.
Waa muhiim! Inta aadan isticmaalin mukhaadaraadka Kalanchoe, hubi inaad la tashato takhtarkaaga.
Khilaafka isticmaalka Kalanchoe
Kalanchoe, sida geedka kasta, ma aha oo kaliya guryaha dawooyinka, laakiin sidoo kale qaar ka horjeeda. Way yar yihiin. Ma qaadan kartid mukhaadaraad kaas oo ah Kalanchoe, oo leh cadaadis hoose, uur, burooyin iyo cagaarshow. Dadka qaarkiis waxay qabi karaan falcelin xasaasiyadeed.